यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (भदौ १९ गते बिहीबार)::Leading Nepal News
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (भदौ १९ गते बिहीबार)
आज वि.सं. २०७६ साल भदौ १९ गते बिहीबार, तदनुसार ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०५ तारिख
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज हातहतियार र मिलमेसिनरीको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनु होला । सामान्यतया आजको दिन खासै खराब देखिंदैन, विदेशबाट राम्रा र प्रसन्नताका समाचार प्राप्त हुनेछन् । सानातिना घरायसी समस्याहरू र पुराना कुराले मन बिथोलिन सक्छ । तपाईंको रोकिएको काम बन्न सक्छ । उपलब्धीमूलक यात्राको योग छ । गरेको कामबाट सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुनेछ । मनमा कताकता चिन्ता र शङ्का सिर्जना भए पनि आज उत्साहमा कमी हुँदैन ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) पेसा वा व्यवसायका असजिला पक्षको निराकरणका लागि आज गरिएको प्रयास सफल हुनसक्छ । तर्कवितर्क, वादविवाद, छलफल र पढाइलेखाइका क्षेत्रमा सक्रिय भइने छ प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । साझेदारी वा पार्टनरसीपमा कुनै काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने त्यसका लागि आज अनुकूल छ । सोच्दै नसोचेका कामहरू सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । पराक्रम बढ्नुका साथै शरीर फुर्तिलो रहने छ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) आज काम गर्दा आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक आदि विभिन्न उपलब्धीहरू हासिल हुनेछन् । कानून, प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि फाइदा हुने समय छ । दिन छिप्पिंदै जाँदा आर्थिक तथा शारीरिक शक्तिमा ह्रास आउने छ । स्वास्थ्यमा हलुका असर पर्ने सम्भावना छ, खानपान र आहारविहारमा सतर्क हुनुपर्छ । खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ । व्यापारमा ठिकै छ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) आज आत्मबलमा बृद्धि हुनाले सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी स्याबासी पाउन सक्ने दिन हो र अन्य सबैले पनि ज्ञानगुन, अध्यात्म र दर्शनका विषयमा आकर्षण देखाउने छन् । कुनै दीर्घकालिक योजनालाई मूर्त बनाउन आजको चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ । भाइबहिनी र छोराछोरीका क्रियाकलापबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ । मनमिल्ने दौंतरीसँग उठबस हुने दिन हो, प्रेमिल भावना उदय हुनेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) आजको अनावश्यक दौडधुप गर्नु पर्नेछ, काममा किसिमकिसिमका चुनौती देखा पर्नेछन्, नयाँ काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन । खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढ्न सक्छ । शरीरमा आलस्य जाग्नेछ । गरेका हरेक काममा अप्ठ्यारा र चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ । विपरीतलिङ्गी साथीबाट मानसम्मानमा आघात पुग्न सक्छ । मन पापमतिमा आकर्षित हुन बेर लगाउँदैन, संयम हुनुहोला ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्नेछ । व्यापारका क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आज त्यसका लागि अनुकूल समय छ । राज्यपक्षबाट सम्मानित हुने अवसर मिल्नेछ । उपहार पुरस्कार आदि मिल्नेछ । साथीभाइ र बन्धुबान्धवले सहयोग गर्नेछन् । यात्रा सम्पन्न र सफलतम सिद्ध हुनेछ । भाइबहिनीका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना समेत छ । कुनै सरकारी वा सामाजिक काम सम्पन्न गर्ने दिन हो ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) आज तपाईंको बोलीको कदर हुने दिन हो, महत्वपूर्ण स्थानमा बोली बिक्नेछ । आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै सम्पत्तिसम्बद्ध समस्याहरू समाधान हुनेछन् । काममा सफलता पाइने छ ।पारिवारिक खुसी मिल्नेछ । स्वास्थ्य सबल छ । नोकरी र व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईंको वाणि र व्यवहारको सम्मान हुनेछ । सुनचाँदी जस्ता धातुको कारोवारबाट धेरथोर लाभ मिल्नेछ । दीर्घकालिक लगानीका लागि उत्सुक हुनुहुन्छ भने आज राम्रो दिन छ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) आज भाग्यबल बढ्ने समय छ । पारिवारिक उत्थानका लागि समय र धनको जोहो हुनेछ । अध्ययन–अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ । पेसा र व्यवसायबाट लाभ हुनेछ । मित्र र सहयोगीले तपाईंको सहायता गर्नेछन् । तपाईंका महत्वाकाङ्क्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन् । कुनै लाभदायक वस्तुको किनमेल र कारोबार गरिने छ । लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना छ । घरायसी वातावरण पनि तपाईंको पक्षमा रहनेछ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) मनमा उत्साह र उमङ्ग देखिए पनि आत्मबलमा कमी देखिन सक्छ, तर शरीरमा स्फूर्ति, उत्साह र उमङ्गलाई नत्याग्नु राम्रो हुन्छ । अप्ठ्यारामा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्दा धन खर्च हुनेछ । शुभकार्यमा मन आकर्षित हुनेछ । घरभित्रका समस्या हल गर्न आर्थिक व्ययभार बढ्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । रिसराग र प्रतिशोधको भावना त्याग्नु राम्रो हुनेछ । सार्थक यात्राको योग छ । वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट फाइदा बटुल्ने दिन हो ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) आज रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ । भाइबहिनी वा सन्ततिका कारण पनि खुसीको वातावरण बन्नसक्छ । तपाईंका कामधन्धामा सहयोगीको साथ पाइने छ । सामाजिक र परोपकारी काममा सहभागी बन्नु पर्नेछ । विशिष्ट व्यक्ति वा अभिभावकको विचारलाई अनुसरण गर्दा लाभ हुनेछ । अपूरा कार्य पूर्ण हुनेछन् । छात्रछात्राका लागि ज्ञानविज्ञान र चिन्तनमननमा समय बित्नेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) आज आत्मविश्वासमा बृद्धि हुनेछ । मातापिता र अभिभावक वर्गसँग राम्रो सम्बन्ध रहने र महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुनेछ । कर्मचारीले प्रशंसा पाउने छन् । घरायसी काममा दिलचस्पी बढ्ने छ । कर्मसिद्धिको समय छ । व्यवसायिक र सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय निकाल्न सकिने छ्रैन ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मानसम्मान र प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरता आउने छ । पुराना समस्याहरू हल हुनेछन्, पहिले गरेका शुभकर्मको मूल्याङ्कन र प्रशंसा हुनेछ । रोकिएका काम सुरु गर्ने वातावरण बन्नेछ । आर्थिक पक्षमा टेवा पुग्नेछ । मान्यजनको आशीर्वाद पाउनु हुनेछ । लामो प्रयोजनको धन लगानी गर्न वा कुनै दीर्घ प्रयोजनको भौतिक सामाग्री खरिद गर्न आजको दिन अनुकूल छ ।